देउवा सभापति नभई ‘सभापतिका उम्मेदवार’ जस्ता भइरहेका छन् : डा. रिजाल « AayoMail
देउवा सभापति नभई ‘सभापतिका उम्मेदवार’ जस्ता भइरहेका छन् : डा. रिजाल
निःशुल्क एम्बुलेन्स सेवा लिन काठमाडौं महानगरको अपील
काठमाडौं–काठमाडौं महानगरपालिकाले महामारीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा
उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले लिए सपथ
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्। नवनियुक्त
सिंहदरबारमा ओली-नेपाल पक्षका शीर्ष नेताहरुको वार्ता हुँदै
काठमाडाैं–नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि ठोस बाटो पहिल्याउन दुवै पक्षका
नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. मिनेन्द्र रिजालले पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशन नजिकिँदै जाँदा विभागमा धमाधम मनोनयन गरेर पार्टीभित्र तिक्तता ल्याउन खोजेको आरोप लगाएका छन्।
सभापति देउवाले आइतबार राति पार्टीका केन्द्रीय विभागमा पदाधिकारी मनोनयन गरेका थिए। उनले हालसम्म १० विभागलाई पूर्णता दिइसकेका छन्।
आयोमेललाई प्रतिक्रिया दिँदै छाया सरकारका अर्थमन्त्रीसमेत रहेका नेता रिजालले ‘सभापति देउवा सभापति नभई आगामी महाधिवेशनमा सभापतिको उम्मेदवारको रूपमा प्रस्तुत भइरहेको’ आरोप लगाए। कांग्रेसको आगामी महाधिवेशन फागुन ७ का लागि तय भएको छ।
‘हामी यो प्रक्रियामा सहभागी छैनौं, महाधिवेशनको मुखमा मनोनयन नगर्न भनेर ज्ञापनपत्र पनि दियौं, तर सुनुवाइ भएको छैन,’ उनले भने, ‘उहाँको ध्यान पार्टीलाई बलियो बनाउने भन्दा पनि आगामी महाधिवेशनबाट सभापति बन्नेमा छ।’
सभापति देउवा यसरी एकलौटी रूपमा अगाडि बढ्दा पार्टीमा थप तिक्तता आउने र सरकारको ‘अधिनायकवाद’ को विरोध गर्ने नैतिक बल पनि कमजोर हुने रिजालको ठम्याइ छ।
सभापति देउवाले पार्टीका विभिन्न विभागका पदाधिकारी मनोनयन गरिरहेकाप्रति वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडल, महामन्त्री शशांक कोइराला समूह असन्तुष्ट छ। शशांकले आगामी महाधिवेशनमा आफू सभापतिको उम्मेदवार हुने घोषणा गरिसकेका छन्।
काठमाडौं–काठमाडौं महानगरपालिकाले महामारीमा सहयोग गर्ने उद्देश्यले सञ्चालनमा ल्याएको एम्बुलेन्स सेवा निःशुल्क भएको जनाएको छ। प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै महानगरले आपतकालीन
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पूरानै मन्त्रीहरूलाई निरन्तरता दिएका छन्। नवनियुक्त मन्त्रीहरूले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। राष्ट्रपति भवनमा
काठमाडाैं–नेकपा एमालेको विवाद समाधानका लागि ठोस बाटो पहिल्याउन दुवै पक्षका नेताहरुको बैठक बस्दैछ। अपराह्न ६ बजे सिंहदरबारमा दुवै पक्षका नेताहरुको
काठमाडौं–प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार पद तथा गोपनीयताको सपथ लिएका छन्। शितल निवासमा आयोजित एक समारोहबीच उनले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीबाट